Zvipfeko zvemukati → Zvipfeko zvebasa • nyanzvi P & M machira emakomputa
Thermoactive andapeni yakakumikidzwa zvakanyanya kune vanhu vanoratidzwa zvakanyanya nemamiriro ekunze akaoma, senge tembiricha yakaderera, mhepo kana madhiri Mazhinji eiyo assortment yechitoro ndeye thermoactive underwear: T-shirts, underpants uye seti. Thermoactive underwear yakaitwa zvinoenderana nematanho anoshanda.
Nguo dzakagadzirwa nenzira iyi dzinovimbisa rusununguko rwekufamba uye kugara zvakanaka. Kutenda kune izvi maficha, inoshandiswa kwete chete kubasa, asiwo nevanofarira mitambo yechando. Uye zvakare, izvo zvigadzirwa zvatinopa zvinowanikwa pamitengo yemakwikwi nekuda kwemubhadharo watinoraira kuchitoro chedu. Iko kusanganiswa kwemhando yepamusoro uye inokwezva mutengo inoita kuti zvipfeko zvemukati zvakadaro zvinyatso kufarirwa kwete kwete zvehunyanzvi chete asiwo zvakavanzika zvinodiwa.
Thermoactive underwear yakanyatsoenderana nemuviri
Thermoactive underwear, seti yemukati mahembe uye bhurugwa
Underwear inoshanduka-shanduka, inokodzera zvakakwana chimiro. Kukwana kwaro kwakasununguka zvekuti mushure menguva pfupi yekupfeka, unorega kuinzwa. Zvishandiso zvinochinja zvinovimbisa rusununguko rwekufamba, zvichidzivirira kutya kwekusagadzikana. Nekudaro, iro basa hombe rehembe dzemukati dzakadai kuchengetedza hutano nemuviri pakurwisa kwakadzika uye kutonhora kwemuviri.
Thermoactive underwear yakakurumidza kuwana vanonzwira tsitsi pakati pevanofarira zvemitambo uye vezvemabhizinesi, zvivakwa zvayo zvakagamuchirwa zvakanaka, izvo zvinowedzera mukurumbira wayo. Yakasanganiswa nedzimwe mbatya senge Sweatshirts, bhurugwa kana majaketi inokutendera iwe kudzora tembiricha yemuviri mukuchinja mamiriro.
Seti yeye nhema thermoactive yemukati. PLN 38,69 yakazara
Kubudirira kwehunyoro kubviswa
Thermoactive andapeni yakagadzirirwa kushandisa matekinoroji azvino uno. Ivo ndivo vanonyanya kukonzera kusarudzika kupfeka nyaradzo. Kutenda kubviswa kwehunyoro kumatanho ekunze, zvakakwana kune mamiriro apo mushandisi anoratidza kuwedzera chiitiko chemuviri.
Unyoro hunoburitsirwa kumatanda ekunze, ayo akakosha zvakanyanya muchiitiko chekurovedza muviri kwakanyanya. Kufambisa kwakakodzera kwehunyoro kunoderedza njodzi yekunhuhwirira kusingafadzi.
Kuchengeta machira kwakachena zviri nyore kwazvo, hazvidi chero nzira dzakasarudzika kana dzakatsaurwa dzekuchenesa vamiririri, ingo tevera iyo yakapusa mitemo pane chigadzirwa chigadzirwa maererano nekuwacha mamiriro.
Thermoactive underwear, Brubeck bhurukwa
zvipfeko zvemukati zvevarumerineni yebasazvipfeko zvemukati zvevakadzithermoactive workwearthermoactive inoshanda yemukatirinodziya basa rinenizvipfeko zvekushongedza zvemukati zvemukati